काँग्रेसको प्रश्न : गृहमन्त्रीजी के हुँदैछ गुल्मीमा ? - सिम्रिक खबर
सोमबार दिउँसो काँग्रेस कार्यकर्ता र प्रहरी विच भएको झडप
काठमाडौँ । गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिका १२ को रानीपोखरी निमाविको विषयलाई लिएर काँग्रेसले जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मी कार्यालय अघि नेपाली काँग्रेसले गरेको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले धरपकड गरेको छ । झडपमा कांग्रेस जिल्ला सभापति भुवन प्रसाद श्रेष्ठ र नेता पूर्णबहादुुर केसी घाइते भएका छन् । यसरी शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्दा पनि प्रहरी लगाएर दमन गर्नु निन्दनीय भएको भन्दै घटनामा सलग्न भएका दोषीलाइ कारवाही गर्न पनि काँग्रेसले माग गरेको छ । काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै गुल्मीमा भएको सो घटनाले पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै दोषीलाइ कारवाही गर्न माग गरेका छन् । शान्तिपूर्ण रुपमा गरिएको आन्दोलनमा पनि प्रहरी दमन गर्नु, प्रशासनको कार्यालयमा छिर्न नदिने जस्ता घट्नालाइ काँग्रेसले आपत्ती जनाएको छ । विज्ञप्तीमा प्रश्न गरिएको छ – गृहमन्त्रीजी के हुँदैछ गुल्मीमा ? यस विषयमा सार्वजनिक रुपमा गृहले स्पष्टिकरण दिन समेत माग गरिएको छ ।